I-6 GCINA I-THE-DATE TEMPLATES UNOKUZIKHUPHA NGOKULULA - UKWAMKELWA KOMSITHO
Eyona Ukwamkelwa Komsitho I-6 Gcina i-The-Date Templates unokuzikhupha ngokulula
I-6 Gcina i-The-Date Templates unokuzikhupha ngokulula
UBridget Clegg ngumphathi weMveliso yoBugcisa yeBestProducts.com.
UBridget ngumenzi wemidiya onamava osekwe kwisiXeko saseNew York.
UBridget wasebenzela iKnot njengoMhleli Wezithombe ukusuka ngo-2013 ukuya ku-2015.
Sifake iimveliso zomntu wesithathu ukukunceda uhambe kwaye wonwabele awona maxesha makhulu obomi. Ukuthengwa okwenziwe ngekhonkco kweli phepha kungasifumana ikhomishini.
Thumela iindwendwe umhla wokugcina owenziwe nguwe, kodwa kujongeka kulunge ngokupheleleyo? Inokwenziwa. Kufuneka nje uzixhome ngezixhobo zobuqhetseba ezimbalwa. Iitemplate ezinokuthi zenziwe ngokwezifiso, izitampu ezenzelwe wena kunye nezitikha ezintle (njengezitikha zeefoto!) Ziya kukunceda wenze inqaku elihle nelilibalekayo. Fumana usuku lwakho lomtshato inki kwikhalenda yomntu wonke kunye nenye yeeprojekthi zokugcina ze-DIY ezingezantsi!
'Ipensile yethu' kwiTemplate ekhutshelweyo
Ifoto: Ibethelelwe ephepheni
Khuphela itemplate Apha kolu krelekrele lokonga umhla, yongeza iinkcukacha zomtshato wakho kwaye uncamathisele ipensile yegalufa!
Isikhumbuzo seRibhoni Gcina-uMhla
Ifoto: UBrittany Watson Jepsen
Nje ukuba ukhuphele le template yokugcina umhla ngobugcisa, konke okufuneka ukwenze kukubetha imingxunya emibini kuyo kwaye ubophe umtya ujikeleze umnwe! (Printa ikhadi elineenkcukacha zakho ukuze uncamathisele ngasemva.) Fumana itemplate Apha .
IGrafu yePhepha kunye neWashi Tape Gcina-uMhla
Ifoto: Izinto zakudala
Phrinta iinkcukacha zakho zokugcina umhla kwiphepha legrafu kwaye uncamathisele kwisitokhwe sekhadi lephepha elinombala we-washi. Yindlela elula yokuvelisa ngobuninzi imbonakalo eyenziwe ngesandla. Landela la manyathelo Apha ukuzenza.
Ikhadi lokuposa lesitampu esineKhowudi emhlophe
Ifoto: Iphepha leSushi
Ngaba ujonge indlela ekhawulezayo yokwenza eyakho yokugcina-imihla? Oda isitampu serabha esineenkcukacha zakho kuso, emva koko usebenzise i-inki emhlophe ukugximfiza iipostikhadi ezimnyama. Yongeza i isitampu sokuposa esiqhelekileyo , Idilesi esemva kweposikhadi kwaye uyithumele! Yenza isitampu setrabha ngentla apha Apha .
Iikhalenda zesitikha se-Instagram
Ifoto: UJen Carreiro
Guqula ifoto yokubandakanya i-Instagram kwizitikha ezincinci, emva koko wabelane ngazo nabahlobo bakho kunye nosapho kwikhalenda yokugcina umhla. Funda indlela yokwenza izitikha kunye nokukhuphela itemplate yesimemo sekhalenda Apha !
Iphepha leKraft Photo Gcina-uMhla
Ifoto: Ibhlog entle
Phrinta ifoto yakho yokuzibandakanya oyithandayo kwaye wenze ngokwezifiso itemplate eprintiweyo Apha . Vala ikhadi lephepha lekrafti ngentambo enemibala ye-suede ukuze ubambe isitayile!
4 eziprintiweyo ze-DIY zokugcina-iitemplate zomhla
Siyaphambana sithandana nale vidiyo igcina umhla!
I-7 ye-craziest yoyile kakhulu yokugcina-imihla
Isipho seminyaka engama-30 somtshato
indlela yokwenza i-monogram
Iingcamango zesipho seminyaka engama-40 kubazali